Aza menatra miainga amin’ny kely – Blaogin'i Voniary
Na eo amin’ny sehatry ny asa, fananganana orinasa, tokantrano, fiharin-karena, fianarana dia mahatsara zavatra ny fiaingana amin’ny ambany avy eo miakatra tsikelikely.
Lalàna voajanaharin’ny fitomboana
Vao teraka ny OLOMBELONA iray dia tsy mahafantatra na inona na inona, avy eo mahay miarin-doha, mipetraka, mandady, mitsangana ary mandeha. Ny ZAVA-MANIRY indray dia miainga amin’ny voa nafafy na taho nambolena, avy eo mitsiry, MITOMBO MIANDALANA ary mandrobona sy mamelana. Izany no lalàna napetrak’ilay mpahary ho an’ny zava-manan’aina rehetra. Mihatra amin’ny lafin-javatra rehetra koa io làlana io: fahaizana, fihetseham-po, fiharin-karena sy fananganana orinasa sy ny sisa. Mora amintsika anefa ny manaiky io làlana io amin’ny resaka fitomboana ara-batana sy ny fivoaran’ny zava-manan’aina fa lavintsika an-kitsirano izy io eo amin’ny sehatra hafa. Matetika manko isika MITADY HITSIN-DALANA satria MAIKA hahay, maika hanan-karena, maika hanam-pahefana, maika hohajaina, maika hotiavina, maika, maika, maika. Na ny tena marina koa MENATRA, menatra, menatra isika, menatra sao arabin’ny fiarahamonina hoe tsy maharaka lamaody, ambany fari-pahaizana, vahoaka madinika, tsy mahavita ny vitan’ny olona sy ny maro hafa. Tsarovy anefa fa tsy maintsy miainga amin’ny kely ny zavatra rehetra dia mitombo miandalana. Hoy Stephen R. Covey, psikôlôgy amerikanina : “ Misy dingam-pivoarana sy fitomboana ny seha-piainana rehetra. Manan-danja ny dingana tsirairay amin’izany ary mila fotoana. Noho izany, tsy tokony misy dingana tsinontsiniavina.”
Fanekena ny lalàn’ny fivoarana eo amin’ny sehatra rehetra
Raha hanangana orinasa izany ianao, AZA KIVY raha manomboka amin’ny kely, izany hoe mpiara-miasa iray na roa, mpividy vitsivitsy ary fitaovana tsotra. Raha te hahay mitendry piano ianao, mivonona hianatra amin’ny antsipirihany ny tain-dalitra amin’ny solfa sy ny solfezy. Raha misy asa tianao, AZA MENATRA manomboka avy aty ambany avy eo miakatra ny an-tanan-tohatra. Raha tale vaovao ao amin’ny orinasa ianao, AZA KETRAKA raha avonavona, fandavana na fiatsarambelatsihy no asehon’ny olona eo ambany fifehezanao eo am-piandohana satria mandeha miandàlana ny fanajàna. Toy izany avokoa eo amin’ny sehatra rehetra. Averiko ihany: mandeha tsikelikely ny fivoarana. Raha nanazava ny lalana nodiaviny ilay olona manan-karena indrindra eto Madagasikara Ylias Akbaraly, karana izy io, dia nilaza fa tao anatin’ny roapolo taona izy no nihary an’io hareny io. Misy hevitra roa karazany mety ho tonga ao an-tsain’ny tanora rehefa mahita ny trano mijoalajoala, ny harem-be, ny orinasa lehibe efa mijoro. Ny voalohany dia hoe: “aleo miditra amin’ireo zavatra efa misy ireo fa ny tenako tsy ahatsangana toy ireo mihitsy”. Ny faharoa indray manao hoe “oviana re no mba ho tonga tahaka izao ny zavatra atsangako!” Ilay toe-tsaina voalohany, azo lazaina hoe simba tanteraka satria tsy misy risi-po, tsy misy faniriana, tsy misy tanjona fa miaina fehy miaina fotsiny. Ilay faharoa indray mety ahavita zavatra ihany raha tsy kivy eny an-dalana. Ny tsy fantatry ny tanora manko dia FIAFIANA, FINIAVANA ary FIKIRIZANA no AO AMBADIK’IRENY FAHOMBIAZANA hita etsy sy eroa ireny.
Ohabolana sy fomba fitenenana momba ny fiaingana amin’ny kely
Ireto misy fomba fitenenana entina hanaitra ny hambom-ponao mikasika ny firosoana tsikelikely amin’ny tanjona izay irinao.
“Ny erikerika maha tondra-drano”
« Tsy vita tao anatin’ny indray andro i Rôma »
“Tsikelikely no ananganan’ny vorona ny tranony”
« Tsy maintsy manomboka amin’ny dingana voalohany ny dia lavitra izay ho alehanao »
“Ny fiekena ny tsy fahalalana no dingana voalohany amin’ny fianarana”
fahaiza-miaina, fananganana orinasa, fandraisana andraikitra, fikirizana, mandeha tsikelikely, mitombo miandalana